बेइमान होइन, इमानदार बनौँ | चितवन पोष्ट दैनिक
बेइमान होइन, इमानदार बनौँ
२०७० पुष १६, मंगलवार ०६:३६ गते
माहौल त्यस्तै भएर होला, यतिखेर मन राजनीतिमय भएको छ । म राजनीति गर्दिनँ । यो सिस्नुघारीमा आउन्नँ । टाढा बस्छु । यस्तै–यस्तै चलचित्रे सम्वादहरु बोले पनि एउटा चेतना जागृत भएको नागरिक राजनीतिबाट भाग्दाभाग्दै राजनीतिमै गएर ठोक्किने रहेछ । हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरु प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष राजनीति नामकै भित्तामा गएर आड लिने रहेछन् । गर्दिनँ भन्दा झन् बढी गरिने रहेछ । समसामयिक गतिविधिहरुका बारेमा आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा दीर्घकालदेखि लेख्दै आइरहेको छु । मेरा पनि आफ्ना सीमाहरु छन् । म आफूलाई सामान्य जिज्ञासु ठान्दछु । सिक्दै पनि छु । कतिपय मामिलामा आफूलाई निरक्षरभन्दा पनि निरक्षर पाउँछु । अज्ञानी रहेछु भन्दा अलि ज्यादती होला । तर, आफूलाई बेलाबेलामा खोक्रो अनुभूत नगरेको होइन ।
मंसिर चार अब हामीबाट धेरै टाढा गैसकेको छ । चुनाव होला वा नहोला भन्ने कुरा अब रहेन । यतिखेर मेरो दिमागमा केही राजनीतिक बिम्बहरु सल्बलाइरहेछन् । एउटा बिम्ब हो, ७८ भोट अर्थात् दाजु भीमबहादुर तमाङ । छाता, सुराही र ट्याङ्का पनि बेलाबेलामा दिमागमा आउने बिम्बहरु हुन् । यिनीहरु एउटा अमूक पार्टीसित सम्बन्धित भए पनि सबै दलका राजनीतिक विद्यार्थीहरुका निम्ति असल पाठ हुन् । म कुनै दलविशेषको हिमायती होइन । मेरो हृदयको आवाज हो– इमान । माथिका बिम्बहरुले इमान र नैतिकतालाई नै संकेत गर्दछन् । यहाँ एउटा पुरानो कथा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
२०३४ साल जेठ ९ गतेको नियुक्तिपत्र हातमा लिएर म नवलपरासी जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने विकट स्थान, रूचाङ गाविसमा मास्टरजी हुन पुगेँ । पराजुली परिवारसित मितेरी साइनो गाँसियो । मीतज्यू मोतीप्रसाद पराजुलीको यसैपालि देहान्त भयो । दुईवटी मितिनी । कान्छी मितिनीको पुत्र धर्म पराजुली पछि राजनीतिमा लागेछ । २०५४ सालको निर्वाचनले रूचाङ गाविसलाई एमालेमय बनाएछ । वामपन्थी राजनीतिमा लागेको मेरो शिष्य एवम् मीतछोरो एमाले पार्टी फुटेपछि दिक्दार भई जंगल पसेछ । पछि सहिद !
२०५७ सालमा म फेरि रूचाङ पुगेँ, ससुराली जाने क्रममा । सबै कथा थाहा पाएँ । इमानदार थियो धर्म पराजुली, सहिद भयो । यहाँ धेरैधेरै इमानदार धर्म पराजुलीहरु सहिद भएका छन् र बेइमानहरु सत्तामा पुगेर राष्ट्र लुटिरहेछन् । सबै दलमा यो रोग छ । कुनै एउटा दलविशेषलाई आक्षेप लगाउन खोजिएको होइन । जहाँ गए पनि इमानदार र नैतिकवान् पात्रहरु पलायन भएको देख्दा मनमा चस्सचस्स हुनेरहेछ । २०७० साल असोज १६ गते एक जना हितैषी मित्रसित खास ठाउँमा भेट भयो । वार्ता भयो । मित्र पनि इमानदार छन् र एउटा जिम्मेवार पदमा छन् । गम्भीर कुराकानीका क्रममा मैले झन्डै १८÷१९ वर्षअघिको मेरो एउटा चेलाका बारेमा कुरा उठाएँ । मित्रले चाख मानेर सुन्नुभयो । स्कुलमा राजनीतिक गतिविधिमा निकै सरिक हुन्थ्यो, त्यो चेलो । मलाई कत्ति पनि मन नपर्ने । एक दिन गालामा एक थप्पड हानेँ पनि । पछि, अलिपछि ऊ भूमिगत भयो । एक अर्थमा डराएँ पनि । मैले उसकै भलाइका निमित्त गुरूप्रसाद अर्पण गरेको थिएँ । तर, चेलो साँच्ची नै निष्ठावान् र इमानदार रहेछ । अचेल मेरो शिष्य के गर्दछ ? मैले ती मित्रसित जिज्ञासा प्रकट गरेँ । ऊ मज्जासित गाई पालेर बसिरहेको छ, जवाफ आयो । हाम्रो गौरवशाली बन्धुहरुले आफ्नो शरीरलाई जरासन्ध बनाएपछि मेरो त्यो खास शिष्य पनि वाक्क, दिक्क, प्याक्क भएछ क्यारे । मनमनै भनेँ, इमानको अन्तिम गन्तव्य यही हो ।
अब विचार गरौँ, के हामीलाई इमानदार बन्न मन लाग्दैन ? नैतिकवान् बन्ने रहर छैन ? सत्य बोल्न सकिन्छ ? असललाई असल र खराबलाई खराब भन्न सकिन्छ ? कि हरेक इमानदार योद्धाहरु अन्तमा गाई पाल्न थाल्दछन् ? साँच्चै भन्ने हो भने टाँडी क्याम्पसको गतिविधिबाट वाक्क भएर मलाई पनि बेलामौकामा अलि उपयुक्त ठाउँमा गएर बाख्रापालन व्यवसाय गरौँ–गरौँ हुन्छ । सीताजी भैँसी पाल्न मरिहत्ते गर्छिन्, उनकै इच्छा पूरा गर्न ८÷१० वटा गाईभैँसी पालौँ कि त ? पलायन हुन्छ मान्छे । मैले हेर्दाहेर्दै मेरै दामादश्री बाबुराम पुरी पूरै पलायन हुनुभयो । आफ्नो नातेदार भनेर वकालत गरेको होइन– उहाँ इमानदार हो÷होइन, समाजले जानोस् । तर बेइमान कत्ति पनि होइन । किन यस्तो भइरहेछ ? खोइ मूल्यको राजनीति ? खोइ शीर्ष पुरूषहरुमा देशको माया ? बन्द, बन्द, बन्द– यो बन्दले सर्वसाधारणलाई कति दिक्क बनाएको छ ? ती मित्रलाई वर्तमान राजनीतिक गतिविधिको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्दै भनेँ– बन्धु, जसले शासन गरे पनि अलि मर्द भएर शासन गरोस् । पेलम्, पेले, पेलानी नभई देश बन्लाजस्तो लाग्दैन । जताततै अराजकता छ । मान्छे यति भ्रष्ट र बेइमान भए कि आफैँमाथि पनि शंका लाग्न थालेको छ । कसैमाथि पनि विश्वास गर्ने वातावरण रहेन । एक पटक उदार तानाशाही चाहिएला जस्तो छ यो मुलुकलाई । यो गञ्जागोल, यो भद्रगोल, यो उकुसमुकुस कहिलेसम्म ? संक्रमणकालको आयु कहिलेसम्म ? के भारत, चीन, अमेरिका आदिले बढी हस्तक्षेप गरे भनेर हामी अकर्मण्य बन्न मिल्छ ? के हामी आफ्नो देश आफैँ बनाउन सक्दैनौँ ? के आमएकता सम्भव नभए पनि वाम एकता हुन सक्दैन ? मेरो मनले भन्यो– सक्दैन । अहंकारले त्यो हुनै दिँदैन । हो दाम–एकता सम्भव छ । आज पैसा आउने ठाउँमा जो पनि एकढिक्का भएका छन् । पैसा कुनै पनि मूल्यमा मिसन पैसा, कमिसन पैसा भिजन पैसा, सिजन पैसा । अनि कहाँ मौलाउँछ इमान ? हरेक इमानदार मान्छे अब पलायन हुन्छ । उमेर छ र अवसर पाए चढ्छ जेट । देशको माया भनेर माटो चाटेर गर्जो टर्दैन । आज अमेरिकालाई धारे हात लगाउने हरेक ठूलाबडाका सन्तान अमेरिकामै सुरक्षित छन्, विडम्बना !
सबैलाई मिलाएर लैजाने एउटा विशिष्ट कलाकारको अभाव अहिले पनि खट्केको छ । देश सबैको साझा चौतारी हो । नेपाल रहे हामी नेपाली रहने हौँ । सिक्किमको इतिहास टाढा छैन । बुद्धलाई पनि हामीबाट टाढा बनाउन खोज्ने शक्तिले हाम्रो अस्तित्वमाथि धाबा नबोल्ला भन्न सकिन्न । बेइमानहरुको हातमा राजनीति र इमानदारहरु गाईपालन, माहुरीपालन, बाख्रापालन र तरकारी खेतीमा लाग्दा मर्ज भन्ने शब्दको त्रास मनमा रहिरहने रहेछ । ठूलो माछा र सानो माछाको कथा केटाकेटीमै पढिएको हो । हामी सबै नेपाली ज्यादै चनाखो हुनुपर्ने समय हो यो । खेल खेल्दै गरौँला । पहिला खेल मैदानलाई जोगाउनेतर्फ लागौँ । घरमा आगो लाग्न सक्छ भनेर पहिल्यै इनार खनौँ । इमानदार बनौँ । आफूले आफूलाई फगत नेपाली भनौँ । हाम्रो रगत नेपाली, हामी फगत् नेपाली । यो जातीयताको जहरले गाउँ र सहरलाई खरानी बनाउला, चेतना भया । जय इमान !